Ny iOS 15 sy ny iPadOS 15 dia nandiso fanantenana ny mpampiasa | Vaovao IPhone
Ny iOS 15 sy ny iPadOS 15 dia nandiso fanantenana ny mpampiasa
Miguel Hernandez | 21/06/2021 22:00 | iOS, iOS 15
Vao haingana ianao no afaka nanontany taminay nandritra ny WWDC21 ny fanombohana ny iOS 15 sy iPadOS 15, ny rafitra fiasa finday an'ny orinasa Cupertino izay, toy ny isan-taona, dia manomboka ny fotoam-pitsapana eo anelanelan'ny volana Jona sy Septambra. Na izany aza, taorian'ny fanovana be nandritra ny taona maro dia toa nitaky zavatra manaitra kokoa ny mpampiasa sasany.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manambara ny tsy fahafaham-po tanteraka amin'ny zava-baovao ao amin'ny iOS 15 sy iPadOS 15, izay mety handiso fanantenana tanteraka. Na izany aza, ny orinasa Cupertino dia manam-pahaizana amin'ny famelana ny tsara indrindra hatramin'ny farany, farafaharatsiny rehefa miresaka momba ny fiasa miafina na ny zava-baovao izahay, tsy resy lahatra amin'ny iOS 15 koa ve ianao?
Vao tsy ela akory izay ireo naman'i SellCell dia nanao fanadihadiana ny mpampiasa maherin'ny 3.000 momba ny fampisehoana ny iOS 15 sy iPadOS 15 miaraka amin'ny fiheverana manokana ny zava-baovao. Na izany aza, Maherin'ny 50% amin'ireo mpampiasa nohadihadiana no nilaza fa "kely loatra" na "tsy mampientam-po velively" ny fanatsarana, raha 28,1% kosa nilaza fa mahaliana ihany izy ireo. Na izany aza, efa ho 20% no tena afa-po tamin'ny vaovao natolotry ny orinasa Cupertino. Raha vantany vao vita tanana mena, ny lahasa farany mahavariana ho an'ny mpampiasa dia ny mampiditra karatra famantarana amin'ny fampiharana Wallet ary koa ny fanatsarana ny Spotlight. Avy eto dia lefona iray manohana ny Spotlight, izay any Espana dia asa iray nozimbazain'ny mpampiasa ary mety hanamora ny andavan'andro anao izany.
Etsy ankilany, ny sisa amin'ireo fampiasa dia saika tsy voamariky tanteraka, raha ny maro an'isa dia mino fa tokony nampiditra widget mifandraika i Apple, ny Display-on-Display foana na ny fampidirana ireo fangatahana mitaky fitakiana be kokoa toa ny Final Cut Pro amin'ny iPad. Manampy trotraka ady hevitra momba ny anaran'ny iPhone ho avy io. Na izany aza, ary raha tsorina ny marina, ireo fiasa vaovao vitsivitsy ireo dia manampy amin'ny fanatanterahana ny System Operating sy fanatsarana izay efa misy, tsy tsara ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny iOS 15 sy ny iPadOS 15 dia nandiso fanantenana ny mpampiasa
Ricardo Alexis Marin dia hoy izy:
Mampatsiahy ahy ireo fiasa vaovao vitsivitsy ao amin'ny iOS 6 rehefa nivoaka izy io
Valiny tamin'i Ricardo Alexis Marin
Azo antoka fa niandry blaster atomika aho, na teleporter. Tsy afaka mametraka ny zava-drehetra isan-taona ianao ary manavaka azy isaky ny mandeha. iOS 15 dia mitondra fanatsarana mihoatra ny 100 amin'ny fitambarany, ny sasany amin'izy ireo dia tena mahaliana. Betsaka no tsy mahita afa-tsy estetika nefa tsy mieritreritra fa mety kokoa raha mandeha tsara sy tsara ny zava-drehetra ary hatsaraina ny fampiharana mba hahomby kokoa.
Valiny tamin'i Pedro
teban dia hoy izy:
Nampiasa sary masina mitovy amin'izany izahay nandritra ny 7 taona, izany no antony ampiasako ny jailbreak amin'ny andro hijanonan'ny jailbreak amin'io andro io dia najanoko ny fampiasana iPhone.
Mamaly an'i teban
Hitanao ve ny tiako holazaina? "Ny andro tsy ahafahako manova ny sary masina dia apetrako ny iPhone." Ireo no karazan'olona mitsara ny kalitaon'ny telefaona amin'ny alàlan'ny sary masina, raha ovaon'izy ireo isan-taona dia pass fa raha tsy izany dia tsy misy dikany.
Azo atao izao ny manandrana an'i Amazon Luna tsy misy fanasana
Fitaovana sy vokatra Apple izay tsy tokony halainao amin'ity andro lehibe ity